ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်): လမ်းပျောက်မြစ်၏ ခြေရာ
ပုခက်လွှဲရမယ့် လက်တစ်စုံက ခုလို မျက်ရည်တွေ သုတ်နေရတာ. .လောကကြီးက ချမှတ်လိုက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုများလား....။
ကိုယ်တိုင် ဆတ်ဆော့ကျူးလွန်ခြင်း မရှိပေမယ့် ပြဿနာအားလုံးရဲ့ တရားခံဟာ သူမဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ ပြစ်မှုတိုင်းအတွက် မျက်မြင်သက်သေ တစ်ယောက်မှ မရှိလည်းဘဲ သူမကတော့ တရားခွင်ပေါ် ရောက်လာခဲ့ရပြီ။
အပြစ်မဲ့တရားခံတစ်ယောက်အတွက် စီရင်ချက်ကရော...။ နည်းနည်းများ မပြင်းထန်မရက်စက်လွန်းဘူးလား။
ပြင်းထန်ရက်စက်လွန်းတဲ့ စီရင်မှုအတွက် အယူခံဝင်လို့ရော...မရတော့ဘူးလား။ တကယ်လို့...သူမရဲ့ အသည်းနှလုံးတစ်စုံနဲ့ လာဘ်ထိုးမှ ရမယ်ဆိုရင်တောင် အစိမ်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ဆွဲထုတ်ပူဇော်လိုက်ချင်ပါသေးသည်။
ရင်မှဖြစ်သော အသွေးအသားကိုတော့ဖြင့် တစိမ်းသူလက်ထဲ မထည့်လိုက်လိုပါ။
“ အန်တီမြရယ်...သမီးလေးကို ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ ကြည့်ပါရစေနော်....”
အားကုန်မောလျနေတဲ့ ကြားကနေ အငမ်းမရ ရှိုက်ငင် တောင်းဆိုမိတော့...တုန်ယင်နေတဲ့ လက်အစုံကပါ ရင်ညွန့်ထက်မှာ လက်အုပ်ချီ တိုးလျှိုးပြီးသား ဖြစ်နေရ၏။
“ မိနွယ်ရယ်...သံယောဇဉ်ဆိုတာ တိကနဲဖြတ်ရင်ဖြတ်။ မဖြတ်နိုင်ရင် အမျှင်တန်းပြီး ပိုပင်ပန်းရတယ်။
သမီးမိဘတွေရဲ့ အစီအစဉ်ကလည်း သမီးကောင်းဖို့ အတွက်ပါ မိနွယ်ရယ်...”
အန်တီမြစကားကြားရမှ သမီးဇောနဲ့ တစ်လောကလုံးကို မေ့ချင်ချင်ဖြစ်သွားရတဲ့ နွယ်...။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုကိုယ် သတိပြန်ဝင်သွားရပြီ။ နာကျည်းစက်ဆုပ်မှုက မောလျနွမ်းနယ်မှုကို ကျော်လွန်ပြီး သွေးနုသားနု နှလုံးသားလေးကို ဖိချေကြပြန်သည်။
လူယုတ်မာရဲ့ သွေး..။ အောက်တန်းစား ကလေကချေရဲ့ တိရစ္ဆာန်စိတ်...။ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းကြုတ်တဲ့ အပြုအမူ...။ ညှီဟောက်ချဉ်တူးနေတဲ့ အနံ့အသက်...။ ယခုပင် မျက်ဝါးထင်ထင် ဘီလူးဆိုင်းဝင်သကဲ့သို့ အော့နှလုံးနာလွန်း၍ မျက်စေ့ကို စုံတင်းတင်းမှိတ်ပစ်လိုက်မိ၏။
မျက်ရည်ပူစီးကြောင်းနှစ်ခုက ဆံစပ်ထဲသို့ စီးဝင်ကာ ချွေးစေးများနှင့် ရောနှောစေးကပ် သွားရလေသည်။
“ ခဏလေးပါ အန်တီရယ်...။ ကိုးလလုံးလုံး တစ်ခန္ဓာတည်းမှာ အတူတူ ပူးတွဲရှင်သန်နေခဲ့ရတာ...။ ၀မ်းထဲက ကျွတ်ပြီးကာမှ
တိမ်ဆို့နစ်ဝင်သွားသည့် သူမအသံနှင့် တစ်ဆက်တည်း သူနာပြုဆရာမ ဒေါ်မြလေး၏ ပင့်သက်ရှိုက်သံက အခန်းကျဉ်းလေးထဲတွင်
မွန်းကြပ်သွားရသည်။ ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းသည့်အပြင် ကျေးဇူးလည်းမကင်း လှတာကြောင့်သာ ဒီကိစ္စကို ကူညီဖို့ လက်ခံခဲ့ရတာ...။ ၀ဋ်လည်မှာတော့ ကြောက်ရွံ့လှပါသည်။ ဒေါ်မြလေးမှာကလည်း ကိုယ်ချင်းစာနာစရာ သမီးလေး ရှိနေသည် မဟုတ်ပါလား။
အနှီးထုပ်လေးထဲမှ နီတာရဲ ပုတုကွေးလေးကို သူမရှေ့နား တိုးကပ်မြှောက်ပွေ့ပြလိုက်တော့...ညှိုးဖျော့နေတဲ့ သူမမျက်လုံးအစုံက ညဉ့်နက်ကောင်းကင်မှောင်မှ ကြယ်ပွင့်လေးတွေလို လက်ကနဲ တောက်ပသွားရ၏။
မိခင်တိုင်းရဲ့ ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ မေတ္တာအလင်းရောင်ဟာ တစ်လောကလုံးရှိသမျှ မိခင်အားလုံး တစ်သွေးတစ်ရောင်တည်းပါပဲ။ လူတန်းစားမရွေး တန်းတူလင်းလက်ကြတာပဲ။ အားလုံးအတူတူ ဖြူစင်တောက်ပကြတာပဲ။
သို့ပေမယ့်...သူမရဲ့ မေတ္တာအလင်းရောင်ဟာ သမီးလေးပေါ်မှာ ဖြန့်ကျက်မိုးကာပေးနိုင်လောက်တဲ့ အဖြူရောင်သက်သက် သန့်စင်တဲ့အရောင် မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အမည်းစက်တွေ စွန်းထင်းပြီး ညစ်ထေးမွဲပြာနေတဲ့ သူမဘ၀ဟာ သမီးလေးကို လုံခြုံနွေးထွေးစေ လောက်အောင် စွမ်းအင်မပြည့်ဝခဲ့ဘူး။ သမီးငယ်ကို ပွေ့ချီသိမ်းဖက်ရမယ့် လက်အစုံဟာ လူတကာရဲ့ တံတွေးခွက်မှာ သူမ၏ မိဘနှစ်ပါးကို မနစ်မွန်းအောင် ဆယ်မ ကယ်တင်ရတော့မည်။
ဘ၀ပေး ကြမ္မာရိုင်းက မဆန်နိုင်တဲ့ သူမဘ၀ရေပြင်ကို စုန်ဆင်းခွင့်လည်း မပေးတော့ ဘဲ လှောင်ကန်ထဲက ရေသေလို ဘ၀ရောက်အောင် တမံတုတ် အကျဉ်းချလိုက်တော့သည်။
တရားခံပြေးတစ်ယောက်လို ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြင့် အန်တီမြ ခေါ်ဆောင်ရာ မြို့ပြတစ်ခုကို လိုက်လာရသော ညတစ်ညက ခါးသက်နာကျည်းစရာ ကောင်းလှသည်။
ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် သူစိမ်းဆန်လှသော မြို့ပြမြင်ကွင်းများက ရွာသို့ ရံဖန်ရံခါမျှသာ ရောက်လာတတ်သော... မနည်းကြီး ကြိုးစားစပ်ကာမှ အဝေးကြီး ဆွေမျိုးလှမ်းတော် ရသော...အန်တီမြထက်ပင် အေးစက်ဝေးကွာသေးသည်ဟု အားငယ်ရသည်။
ရုပ်ရှင်၊ ၀တ္ထု ဇာတ်ကွက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေသော သူမ ဘ၀ဖြစ်အင်ကလည်း တွေးမိတိုင်း သရော်ပြုံးမဲ့စရာတော့ အကောင်းသားပင်။
မြို့ပြမှ မိန်းမငယ်များ ဘ၀အမှားကို ပြင်ဆင်ဖုံးကွယ်ရန် တောရွာများမှာ ပုန်းခိုလေ့ရှိပေမယ့် သူမကျကာမှ တောသူအစစ်ကနေ မြိဲ့ပေါ်တက်ပြီး ဘ၀အမှားကို ပြင်ရမတဲ့လေ။
ရွာဆိုပေမယ့် ကားလမ်းမပေါ်က မြို့နှင့်နီးသော ရွာကြီးပေမို့ သူမတို့ မိသားစုက လူနေမှု အဆင့်အတန်း မနိမ့်ကြချေ။ ပဲ၊ နှမ်း လှောင်ရုံကြီးများ၊ စပါးကျီကြီးများဖြင့် စီးပွား အထူးပြေလည်ကြသည် မို့လည်း ဒေါ်မြလေးတို့လို မြို့နေဟန်များ လူလတ်တန်းစားများထက်ပင် ပြည့်စုံကုံလုံကြသေးသည်။
ဒေါ်မြလေးသည်ပင် မြို့ပြ၏ ၀င်ငွေထွက်ငွေက ဟန်ချက်မညီလှသည်မို့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သော ဦးသာမြတို့ရွာကို အပိုဝင်ငွေလေးရအောင် ပဲ၊နှမ်း ပေါ်ချိန်တိုင်း ဦးသာမြ၏ ပဲလှောင်၊ နှမ်းလှောင်၊ စပါးလှောင်ငွေထဲမှာ ရှယ်ယာလာဝင်ရ၏။ ရွာရှိ သူမတို့ မိသားစုကျန်းမာရေးကိုလည်း ကူညီစောင့်ရှောက်ပေး၏။ ဦးသာမြကလည်း ငွေပေါ်ချိန်မှာ အမြတ်ကို ပိုပိုသာသာလေး ခွဲပေးတတ်ပြီး ရှုံးသည့်နှစ်များမှာလည်း ငွေရင်းကိုတော့ မဆုံးရှုံးစေဘဲ ပြန်ပေးခဲ့သည်ပင်။
ဒီလို အသွားအပြန်လေးတွေကြောင့်လည်း ရွာမှ သူမတို့မိသားစု ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် ဖျတ်လတ်သလောက် ဒေါ်မြလေးတို့ မြို့ပြကြပ်တည်းမှုကလည်း အသက်ရှူချောင်လည် ပြေပြစ်ရသည်။
သူမတို့မိသားစုက အနေရိုးကုပ်ပြီး မိသားစုသုံးဦးတည်းသာ ရှိသောကြောင့် မိဘများက တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး မြတ်လေးနွယ်ကို ရွာကျောင်းရှိ ရှစ်တန်းထိသာ စာသင်စေခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ယခုကဲ့သို့ တွဲဖက် အထက်တန်းကျောင်းကလည်း ရွာမှာ မရှိသေးတော့ သူမ၏ ပညာရေးက ရှစ်တန်းနှင့်ပင် ပြီးဆုံးခဲ့ရသည်။ မြို့ပို့ပြီး ကျောင်းထားရလောက်အောင် ပြည့်စုံကြွယ်ဝပေမယ့် မခွဲရက်နိုင်ကြ။ မျက်စေ့အောက်မှာသာ ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်လိုခဲ့ကြသည်။ အရိပ်ကြည့် မြတ်နိုးလိုခဲ့သည်။
ဘိုးဘွားပိုင်လယ်ယာများ အမြောက်အများရှိသော်လည်း လယ်အကြောင်း၊ စပါးအကြောင်း မြတ်လေးနွယ် ဘာတစ်ခုမှ တီးမိခေါက်မိ မရှိ။ မိဘများကသာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ အကုန်သိမ်းကြုံးလုပ်၍ သမီးလေးကို ရွှေပေါ်မြတင် ထားခဲ့သည်။
တောရွာသာဆိုပေမယ့် ရွာကျောင်းကလည်း ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာ။ သူမတို့ အိမ်ကလည်း ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာ။ ပင်ကိုယ်ဗီဇကလည်း အေးဆေးရှက်ကြောက်တတ်သူမို့ ကျောင်းနှင့် အိမ်သာ အသွားအပြန်ရှိ၍ ရွာထဲသို့ လည်ပတ်ခဲလှသည်။ ရှစ်တန်းအောင်ပြီးတော့လည်း အိမ်မှုကိစ္စလေး ကူညီလုပ်ကိုင်ပြီးသည်နှင့် မြို့မှ သူမဖခင် ၀ယ်လာပေးသော စာအုပ်များနှင့်သာ အိမ်တွင်းအောင်းနေလေ့ရှိသည်။
ယုတ်စွအဆုံး မိုးတွင်းဖက် လယ်စိုက်ချိန် ရေဗွက်စိထဲမှာ လယ်ကန်သင်းပေါ် တစ်ခါဖူးမှ လမ်းမလျှောက်ခဲ့စဖူး။ လယ်နှင့် စပါးခင်းကို တောသူသာဆိုသေး မြို့သူနှင့်မခြား အဝေးမှသာ မြင်ဖူးသည့်သူ။ ရေခြောက်သည့် နွေလောက်သာ တစ်ခါတစ်ရံ ဖြတ်လျှောက်ကြည့်ဖူးသူ...။
ဤမျှလောက် ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှုနည်းပြီး အပေါင်းအသင်း နီးစပ်မှု မရှိသောကြောင့်များ ဤမျှ အကျည်းတန်သော အဖြစ်ဆိုးနှင့် ကြုံဆုံရသလော။ အတိတ်ဝဋ်ကြွေးကြီးမားလွန်း၍သာ ရိုးသားအေးဆေးသော၊ ငြိမ်သက်တည်ကြည်သော၊ ရည်းစားသနာပင် တစ်ယောက်မှ မရှိသော...တောရိုင်းပန်းလေးတစ်ပွင့် လွယ်လင့်တကူ ကြေမွသွားခဲ့ရလေသလော။
ထင်မှတ်မထားသည့် ကြမ္မာဆိုးက မိုးတစိမ့်စိမ့်နှင့်အတူ သူမဘ၀ထဲ ၀င်ရောက်မွှေနှောက် သွားခဲ့သည်။ ထိုနေ့က...သူမ အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး တစိမ့်စိမ့် နာကျည်း ငိုကြွေးနေရတော့မည်ကို သိနေသည့်အလား ရှစ်ခွင်တိုင်း အုံ့မှိုင်းကာ ညိုမှောင်နေခဲ့လေသည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်း ဥပုသ်ဇရပ်မှ ပြန်လာသော အမေနှင့် ကောက်စိုက်စ လယ်ကွက်များဆီမှ ပြန်လာသော အဖေတို့က ခြံဝမှာ အသက်ပျောက်နေသော အိမ်စောင့်ခွေးကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ စိုးရိမ်စွာ အိမ်ပေါ်သို့ အပြေးအလွှားတက်လာကြသေးသည်။
သို့ပေမယ့် ကိစ္စအားလုံးက လွန်ပြီးခဲ့လေပြီ။
သူမဘ၀က အဖြူထည်သက်သက်မှ ဘယ်တော့မှဖျက်မရနိုင်မည့် မည်းညစ်စုတ်ချာသော အရောင်များဖြင့် သုတ်လိမ်းခံလိုက်ရပြီ။
ရွံရှာစက်ဆုပ်လွန်း၍ မည်သို့ပင် ဆေးကြောသော်လည်း မစင်ကြယ်နိုင်တော့သော အညစ်အကြေးများက သူမဘ၀ကို ညစ်နွမ်းစေခဲ့ပြီ။ ထိုအညစ်အကြေးများကို သူမဘ၀မှ ဖယ်ရှားလိုပါက ဘ၀စာမျက်နှာကို ဆုတ်ဖြဲပစ်ရုံမှတစ်ပါး တခြားမရှိတော့ပါ။
သူမဘ၀ကို သူမ မည်မျှပင် လည်စင်းခံလိုက်ရန် အားလျှော့အရှုံးပေးချင်ပေမယ့် ဆုတ်ဖြဲပစ်ရန် မဖြစ်နိုင်သော သူမဘ၀ စာမျက်နှာကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် ပြင်ဆင်ရန် မိဘများက ကြိုးပမ်းကြပြန်သည်။ မိဘမေတ္တာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသည်မှာ သူမဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး အကြွင်းမဲ့ ထင်ရှားလှသည်။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးမှ ယခုအရွယ်ထိ ပြီးပြည့််စုံစွာ အပူပင်မဲ့စေရုံမက အပူနှင့် ကြုံလာပြန်
တော့လည်း တတ်နိုင်သမျှ ငြိမ်းအေးအောင် စွမ်းဆောင်ပေးကြပြန်သည်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းေးသာ သူမဘ၀ကို မွှေနှောက်ပူလောင်စေခဲ့သူကလည်း ဖခင်၏ လယ်လုပ်သားများထဲမှ အကျင့်ပျက်ပြား ဆိုးသွမ်းလွန်းသူမို့ အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ လက်ဆက်ပေးရန်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူယုတ်မာကိုယ်တိုင်ကလည်း သိမ်ဖျင်းသေးနုတ်သူ ပီပီ ပြဿနာကို ရင်မဆိုင်ရဲဘဲ ရွာမှပင် ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေသည်။
ဒီလိုဆိုပြန်တော့...ကာယကံရှင်မိသားစုနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသာ သိသောကိစ္စမို့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရွာလုံး မရိပ်မိနိုင်မည့်အတူတူ...
လူယုတ်မာ၏သွေးကို လောကကြီးထဲ အရောက်မခံဘဲ ဖောက်ထုတ်ဖျက်ဆီးပစ်ရလျှင်ကော...။
မိဘနှစ်ပါးက ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် မြန်မာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည့်အပြင် သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီိလိုရက်စက်မှုမျိုးကိုတော့ ဘ၀အသစ် ပြန်ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်တောင် မလုပ်ရက်နိုင်ပါ။
မိသားစုပြဿနာမှာ ဖုံးမရ၊ ဖိမရ ခေါင်းမီးတောက်တမျှ ဖြစ်နေချိန်တွင် ရွာသို့ စပါးလှောင်ရန် ငွေလာထည့်သော သူနာပြုဆရာမ ဒေါ်မြလေးကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မိဘများက ရွေးချယ်လိုက်တော့သည်။ သူမ မိဘနှစ်ပါးက ခေါင်းချင်းရိုက် အကြံဥာဏ်ထုတ်သမျှကို
ဒေါ်မြလေးက ကောင်းနိုးရာရာ စီမံမှုများ ဖြည့်စွက်၍ မြို့ပြအလည်အပတ်ခရီးအဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အသိပေးစေခဲ့သည်။
မနည်းကြိုးစားစပ်ကာမှ တော်ရသော ဆွေမျိုးဆိုပေမယ့် ဒေါ်မြလေးက အဒေါ်အရင်းအချာပမာ သူမ အနေရခက်လောက်အောင်
စေတနာကောင်းလွန်းလှသည်။ ဒေါ်မြလေး ခင်ပွန်းက အလုပ်တာဝန်ဖြင့် တစ်မြို့တစ်နယ်မှာ...။ ဒေါ်မြလေး သမီးငယ်ကလည်း တစ်နေကုန် ကျောင်းတက်ရသူမို့ ဒေါ်မြလေး ဆေးရုံသို့ အလုပ်သွားချိန်ဆိုလျှင် သူမတစ်ယောက်တည်း။
အိမ်မှုကိစ္စတွေ တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးပေမယ့် လူနည်းသောအိမ်ကလေးမှာ မယ်မယ်ရရ အလုပ်မရှိလှပါ။ စိတ်လေလွင့်
တွေးတောချိန်နည်းအောင် မည်သို့ပင် အလုပ်ရှာလုပ်ပေမယ့် အချိန်အားရတိုင်း မိဘများအပေါ် ကျေးဇူးမဆပ်နိုင်ဘဲ စိတ်သောကများသာ ဝေစေခဲ့သည့် သူမအဖြစ်ကိုသူမ ၀မ်းနည်းနေမိမြဲ...။ ရင်ဝယ် လွယ်ပိုက်ထားရသော ကလေးငယ်ကို ပွတ်သပ်မိတိုင်း မိခင်မေတ္တာဖြင့် ထွေးပွေ့ခွင့်မရတော့မည့် အခြေအနေအတွက် နာကျည်းမိမြဲ....။
သူမ၏မိဘမိများကတော့ မမြင်တွေ့ရသေးသော ကလေးငယ်ထက် သူတို့၏သမီး ရှေ့ရေးကိုသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် စဉ်းစား စီစဉ်သည်က သဘာဝကျလှပါသည်။ သွေးကလည်း လူယုတ်မာ တိရိစ္ဆာန်ကောင်၏ သွေးပေကိုး။
သူမကတော့ မည်မျှပင် စက်ဆုပ်နာကျည်းစေဦးတော့ ရင်မှာလွယ်ထားရသည်က ကိုးလ ဆယ်လ။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စားစား၊ သွားသွား၊ အိပ်အိပ် တစ်သွေးတစ်သားတည်း ဖြစ်နေရသူ။ အလိုဆန္ဒ ဆံချည်တစ်မျှင်မျှ မပါပေမယ့် ဖြစ်တည်ရောနှောနေသည်မှာ သူမ၏ သွေးကတစ်ဝက်။
မည်ကဲ့သို့သော ရက်စက် ပြတ်တောက်မှုမျိုးနှင့် မိခင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်နိုင်ပါအံ့နည်း။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိခင်အပေါင်းကို သူမ လိုက်မေးချင်စမ်းပါတော့သည်။
“ ကလေးတော့ ကံကောင်းပြီ လေးနွယ်ရေ..။ ရန်ကုန်က အန်တီမြ မိတ်ဆွေလင်မယားက ယူမွေးမယ်တဲ့...”
သူမနှလုံးသား အေးခဲမြောက်တက်သွားသည်က ၀မ်းသာပျော်ရွှင်လွန်းလို့တော့ မဖြစ်နိုင်တာ သေချာပါသည်။ တစစ်စစ် နာကျဉ် ကိုက်ခဲလာသည်မှာ ရင်ထဲမှ အသည်းနှလုံးကို ဆွဲထုတ်ယူငင်သွား သည့်အလား...။
မိဘများ အစီအမံကို ခေါင်းညိတ်မိစဉ်ကတော့... တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာသော ပြဿနာအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန် ကြံရာမရဖြစ်နေတုန်းမို့ ထင်ပါရဲ့။ ဘာကိုမှ မဝေခွဲ၊ မပိုင်းခြားနိုင်ချိန်မှာ ပူပူထူထူနှင့် လက်ခံမိတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုက တကယ်တမ်း အောင်မြင်ပြီးဆုံးတော့မည်၊ ထင်ထားတာထက် ပိုမို လွယ်ကူချောမောနေပြီ...ဆိုကာမှ ..။ သူမ ဘာကြောင့် တွေဝေတွန့်ဆုတ်နေရပါသနည်း။
မိဘ စီမံရာကို မငြင်းဆို၊ နာခံရုံမျှဖြင့် မိဘကျေးဇူးဆပ်ရာ ရောက်ပါ့မလား။ ကိုယ်တိုင်က မိဘစိတ် မမွေးနိုင်ဘဲ လူယုတ်မာ၏သွေး ဖြစ်ရသည်နှင့် အလိုမတူဘဲ နာကျည်းစက်ဆုပ်လှသည်နှင့်...အပြစ်မရှိသော ရင်သွေးငယ်ကို စွန့်ပစ်ရမည်ကရော... လူသားဆန်မည် တဲ့လား။ မိဘကျေးဇူး မဆပ်ဖူးသေးသည့် သူမ။ ရေဆန်ကို မလှော်ခတ်နိုင်သေးသည်နှင့် ရေစုန်ကို မစီးဆင်းဝံ့သည်မှာ သိမ်ဖျင်းရာကျ မနေဘူးတဲ့လား။
ဒါဖြင့်...သူမ သတ္တိရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထင်မြင်ချက်တွေ၊ မိဘနှစ်ပါးခံစားချက်တွေ... အားလုံးကို ရင်သွေးလေးအပေါ် ထားသည့်မေတ္တာ၊ ရင်သွေးလေးက ပေးသည့် ခွန်အားသတ္တိတွေဖြင့် ရင်ဆိုင်မည်။ သူမ ကလေးကို သူမကိုယ်တိုင်မွေးမည်။ သူမကိုယ်တိုင် လူလားမြောက်အောင် သွန်သင်ပျိုးထောင်မည်။ သူမကိုယ်တိုင် လုံခြုံနွေးထွေးအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်။
ချီးမွမ်း ခုနစ်ရက်၊ ကဲ့ရဲ့ခုနစ်ရက်မို့ ကြာလာတော့လည်း သူမကိုယ်တိုင်ရော မိဘများပါ ခံနိုင်ရည်ရှိလာမည်။ ရင်သွေးငယ်ကို ကြည့်ကာ မြေးငယ်ကိုကြည့်ကာ.. အားအင်အသစ် ပြန်မွေးမည်။ အဖြစ်မှန်ကို ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်မည်။ အချိန်၏ ကုစားမှုမှာ နေသာသက်သာ ရှိလာမည်။
သို့ပေမယ့်...မိမိတို့က ရင့်ကျက်အနည်ထိုင်လာသည်ပဲ ထားဦး။ လူယုတ်မာ ကလေကချေက အနှောင့်အယှက်မပေးဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေမတဲ့လား။ ရိပ်မိသိရှိသွားသည်နှင့် ကလေးရော လူကြီးများပါ သူ့စက်ကွင်းက အလွတ်ပေး စိတ်အေးရမတဲ့လား။
ကဲ... သူ့ကဏ္ဍကို ကျော်လွှားသွားနိုင်သည်ပဲ ထားပါဦး။ သူမတို့မိသားစုက တခြားတစ်မြို့တစ်ရွာကို ပြောင်းချင်ပြောင်း..။ ဒါမှမဟုတ် ထိုသူက အကြောင်းတစ်ကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရွာကို ဘယ်တော့မှ ရောက်မလာတော့ဘူးဘဲ ဆိုပါတော့။
သူမ၏ ရင်သွေးကလေးက အဖေအပေါ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် လောကအလယ်မှာ မျက်နှာငယ်ရရှာတော့မည်။ မိစုံဖစုံနှင့် လုံခြုံနွေးထွေးစွာနေရသော သူမပင်လျှင် ရက်စက်ယုတ်မာသော စော်ကားမှုမျိုးနှင့် ကြုံရသေးလျှင်...။
သူမရင်သွေးလေးမှာ သားယောကျာ်းလေးဆိုလျှင် တော်သေး၏။ ကံဆိုးစွာ သမီးမိန်းကလေးသာ ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင်...။ သူမလို သာမန်အရည်အချင်းနှင့် နုံအသော မိခင်တစ်ဦးတည်းက မည်မျှလုံခြုံမှုပေးနိုင်ပါမည်လဲ...။
“ ခုမှ တွေဝေမနေပါနဲ့တော့ လေးနွယ်ရယ်...။ သမီးမိဘတွေကလည်း အကြံဥာဏ်ကောင်း၊ အန်တီမြ အစီအစဉ်တွေကလည်း ပိရိသေသပ်တော့ သမီးက ရွာပြန်ရောက်တာနဲ့ အရင်တုန်းကလို အပျိုမလေး မြတ်လေးနွယ်ပဲ။ မြို့ကြီးပြန် မြတ်လေးနွယ်ပဲ။
ခု..မွေးစားမယ့် သူတွေကလည်း ကလေးမရနိုင်တော့လို့ တကယ့်ကို အမွေစားအမွေခံစာချုပ်နဲ့ မွေးမယ့်သူတွေပါ။ ချမ်းသာလိုက်တာကလည်း အရမ်းပဲအေ။
ခုလည်း ...လိုချင်တဲ့ ကလေးရပြီးရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ သားသမီးရင်းလို့ပဲထင်အောင်...ကလေးကိုယ်တိုင်ကလည်း မိဘရင်းလို့ပဲ မှတ်အောင် နိုင်ငံခြားကို အပြီးထွက်ပြီး ဇာတ်မြှုပ်ကြတော့မယ်တဲ့။
ကဲ... ဘယ်လောက် နောက်ကြောင်းရှင်းလိုက်သလဲ။ မွေးလာမယ့် ကလေးကတော့ ကံကောင်းတဲ့ ကလေးပါအေ...”
“ ပညာရော...ငွေကြေးဥစ္စာရော... ထက်မြက်မှုရော သာတဲ့မိဘတွေပါ...” လို့ ပါးစပ်က ဆက်မပြောရက်ပေမယ့် မျက်လုံးတွေနဲ့ ပြောနေတဲ့ အန်တီမြကို ငေးကြည့်နေရင်း.. ကလေးရဲ့ဘ၀ လုံခြုံတိုးတက်ဖို့အတွက် ဒီအစီအစဉ်ထက်ကောင်းမွန် သင့်တော်တာ မရှိတော့ဘူးလို့ နားလည်လိုက်ရပါပြီ။
မိုးတစိမ့်စိမ့်နှင့်အတူ သူမဘ၀ထဲ ၀င်ရောက်လာခဲ့သော နာကျည်းခါးသက်မှု ဒဏ်ရာများက နွေနေပူ ကျဲကျဲတောက်ချိန်တွင် သည်းအူပြတ်မတတ် သောကများအဖြစ် တိုးပွားလာင်မြိုက်လာရသည်။
ကိုးလလုံးလုံး ရင်ခွင်မှာ မခွဲတမ်း လွယ်ပိုက်ထားခဲ့ရသော သွားတူလာဖက်...။ ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်ပေးသော မိခင်ကို လက်ကလေး ခြေကလေးများဖြင့် တိုးဝှေ့နှုတ်ဆက်တတ်သော ကြင်နာဖော် ယုယဖက်...။ ခွဲခြားမရသည့် နှစ်ယောက်ဘ၀မို့ ပူဆွေးမှုကို အံတုကာ သူကလေး အားပြည့်စေမည့် အာဟာရများကို ကြိတ်မှိတ်မြုချခဲ့ရသော ကောင်းတူဆိုးဖက်...။
သမီးကလေးလို့ သိလိုက်ရချိန်မှာ... သူမ၏ မျှော်လင့်ချက် ရေးရေးလေးက ဆပ်ပြာပူပေါင်းပမာ လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။
သားကလေးသာဖြစ်ခဲ့လျှင် သူကလေးဘ၀ လုံခြုံမှုက သမီးကလေးလောက် မပူပန်ရသောကြောင့် သူမ စွန့်စားရင်ဆိုင်ရ ကောင်းမည်လားဟု စိတ်ကူး ကြံစည်နေမိသေးသည်။ ယခုတော့... သူမ၏ မရေရာမှုကို ဒုံးဒုံးချ စိတ်လျှော့လိုက်ရလေပြီ။
ဖမ်းဆုပ် ထွေးပွေ့စရာ လက်မဲ့ဘ၀ဖြင့် ကိုးလလုံးလုံး လွယ်ပိုက်ထားခဲ့ရသော သမီးငယ်လည်း သူမရင်ခွင်မှာ ရှိမနေတော့။ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ဘ၀တစ်ခုဖြင့် စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ ဘ၀သစ် စစေချင်သော မိဘနှစ်ပါး၏ စေတနာကို လစ်လျူမရှုရက်ပေမယ့် သူမ မည်သို့မျှ ဟန်ဆောင်ရန် အင်အားမရှိတော့ပါ။
ကိစ္စအားလုံး စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်တွင် ပိုမိုလှိုက်စား နာကျင်နေသော ရင်မှ ဒဏ်ရာကို အချိန်သမားတော်က ကုစားနိုင်လိမ့်မည်ဟု အားလုံးက ယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြလေသည်။
သို့ပေမယ့် ဘယ်ကို မျှော်ကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် စိုးမိုးမြင်ယောင်နေသော တစ်ခါသာ မြင်လိုက်ရသည့် သမီးငယ်လေး မျက်နှာက သူမ၏ ရင်ကွဲနာကို အပ်များဖြင့် ထိုးဆွနေသကဲ့သို့ နာကျင်လှစေသည်။ အချိန်သမားတော်၏ ဆေးစွမ်းကောင်းများသည် အရိုးစွဲ ဇကာကျ ပိုးထိုးနေပြီးသော သူမ၏ ရင်ကွဲနာကို ဆေးမတိုး...။ မကုစားနိုင်တော့ပေ။
သမီးငယ်ကို ရင်ခွင်မှ ဆွဲထုတ်ယူသွားခဲ့သော်လည်း သူမ၏ မိခင်မေတ္တာကတော့ဖြင့် ဆွဲနှုတ်၍ ရကောင်းသည့် အရာမဟုတ်ခဲ့ပါ။ တစ်နေ့တခြား တစိမ့်စိမ့် တိုးပွားလာသော မိခင်တစ်ယောက်၏ ချစ်မြတ်နိုးမှုများသည်...စီးဆင်းရန်လားရာမရှိဘဲ အတွင်းလှိုက်စားမှု ပြင်းထန်လွန်းမက ပြင်းထန်အားကြီးလာသောအခါ....။
မြစ်၊ ချောင်းများ၏ အသက်သည် စီးဆင်းခြင်းဖြစ်လေသည်။ စီးဆင်းခြင်းနှင့်မှ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သော ရေစီးကြောင်းလေးတစ်ခုသည်... စီးဆင်းရန် လားရာလည်းမရှိ။ ဆန်တက်ရန် အားအင်လည်း မရှိတော့သောအခါ....။
အနယ်နယ် အရပ်ရပ်သို့ တာဝန်လှည့်လည်ထမ်းဆောင်ရင်း...၊ မျက်စေ့တဆုံး တွေ့မြင်ရသော လယ်ကွင်းပြင် ရှုခင်းများကို မြင်ရသည့်အခါတိုင်း... အရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီဖြစ်သော ရွာကလေးကို သတိရစိတ်ပြင်းထန်လာလေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားရောက် မိတ်ဆွေ၏ သမီးလေး ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် သတင်းများကြားရတိုင်းလည်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မျှဝေခံစားစေချင်ခဲ့သည်။
သို့ပေမယ့်....ဒေါ်မြလေး မသွားရဲခဲ့ပါ။ သူမ၏ ကြေမွနေပြီးသော ဘ၀စာမျက်နှာကို မကြည့်ရက်ချေ။ ထို့ထက်မက... တွေးမကြည့်
ရဲသော အခြေအနေတစ်ခုကိုလည်း မြင်ရကြားရလေမလာုး စိုးသောကြောင့် သတင်းမမေး လူမသွားဘဲ နေခဲ့မိသည်။
ထို့အတူ...သားချော့တေးကို အော်ဟစ်သီဆိုကာ လမ်းတကာလှည့် လျှောက်သွားနေတတ်သော...၊ အဆီအင်ါမတည့် စကားများကို တစ်ယောက်တည်း အဆက်အစပ်မရှိ ပြောနေတတ်သော....၊ မိန်းမငယ်များကို ဘယ်နေရာ ဘယ်မြို့မှာပဲတွေ့တွေ့ စေ့စေ့ကြည့်ရဲသည့် သတ္တိမရှိတော့ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ...စုန်ဆန်နိုင်ခွင့် မရှိတော့သော တမံတုတ်ခံထားရသည့် ရေများသည် ရေလှောင်ကန်အတွင်း တည်ရှိနေရမည်
ဖြစ်သော်လည်း...၊ ရေသေမဟုတ်သော မိခင်မေတ္တာများကတော့ စုန်ဆင်းနိုင်ခွင့် မရှိတော့လျှင်လည်း သူမ၏ နှလုံးသားထဲတွင် စိမ့်စမ်းကဲ့သို့ ထာဝစဉ် တစိမ့်စိမ့်ဖြင့် ဘယ်သောအခါမှ ခမ်းခြောက်နိုင်လိမ့်မည် မထင်ပါ။
တစ်လောကလုံးရှိ မိခင်များ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အားလုံး အတူတူပင်...။ ထာဝစဉ် စီးဆင်းချင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
( May, 2010...Beauty Magazine )
rose 16 August 2011 at 01:46
Very interesting story and well-written.
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 16 August 2011 at 09:48
ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ဘတ်ထဲ ဒိုင်းခနဲထိတယ်
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ မြန်မာမိန်းခလေးတို့ရဲ့ သိက္ခာ လွန်ဆွဲတဲ့ပွဲမှာ
စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာက မိခင်ရဲ့ နှလုံးသား